HAYLOU RS3, nyocha, arụmọrụ na ọnụahịa | Gam akporosis
HAYLOU RS3, nyocha, arụmọrụ na ọnụahịa
Anyị na-alaghachi na Androidsis site na iji ntụle dị mma ma ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị chọrọ ohuru smartwatch ohuru a. Ọ bụrụ na ị na-achọ iwere nzọụkwụ nke ndị uwe na-achọkarị na-enweghị ịhapụ nnukwu ego n'ime nnwale ahụ, lelee ihe niile nke a na-enye gị Uzoigwe RS3. Anyị enweela ike ịnwale elele mbinye aka HAYLOU ọhụrụ na ọ na-abịa ọtụtụ iji nye.
Igwe smartwatch adịla kemgbe Ezigbo nkwado maka ama gị. Ificationsma Ọkwa, emega ahụ log na ọtụtụ ndị ọzọ. Mana enwere ọtụtụ na nhọrọ dịgasị iche iche dị na ahịa na mgbe ụfọdụ ọ na-esiri ike ikpebi. Taa, anyị na-eme ka ọ dịrị gị nfe site na ịgwa gị ihe niile gbasara HAYLOU RS3.
1 HAYLOU RS3, nwee uche, mara mma ma rụọ ọrụ
2 Ịkpọghe igbe HAYLOU RS3
3 Ọdịdị nke anụ ahụ nke HAYLOU RS3
4 HAYLOU RS3 Atụmatụ
5 HAYLOU RS3 Njirimara Njirimara
6 Uru na ọghọm nke HAYLOU RS3
HAYLOU RS3, nwee uche, mara mma ma rụọ ọrụ
Ọdịdị elu ahụ abụghị ihe niile mgbe anyị na-ekwu maka ngwaọrụ teknụzụ. Ma obi abụọ adịghị ya na nhazi nke ihe ndị a amalitela ọtụtụ ihe na taa ọ ghọrọ isi ihe. Karịsịa mgbe anyị na-ekwu maka akwa weara nke mejupụtara ụzọ anyị si eji ejiji.
Ọ bụ ya mere eji etinye HAYLOU RS3 n'etiti smartwatches ndị na-adịghị eme ka hà na-adọta uche n'ihi ọdịdị ha. Na a akara dị mfe na-enweghị ihe ngosi na-eme ka anyị lekwasịkwuo anya n'ihe n'ogo nke uru ọ ga-enye anyị. Mana ekwesiri ighota na obu ezie na nhazi ya adighi adi, ọ ka bụ ọmarịcha ngwaọrụ ma arụpụta ya nke ọma. The smartwatch ị na-achọ, zụta HAYLOU RS3 ugbu a ọnụahịa kacha mma.
Ịkpọghe igbe HAYLOU RS3
Anyị na-eleba anya n'ime igbe nke HAYLOU RS3 iji gwa gị ihe anyị nwere ike ịchọta na ya. Dị ka mgbe niile, na unboxing nke smartwatch enwere ole na ole (ma ọ bụ enweghị) ihe ịtụnanya anyị na-ahụ. Ma eleghị anya, n'oge ụfọdụ, onye nrụpụta kpebiri itinye eriri eriri, mana nke a abụghị ikpe.
Anyị nwere elekere n'onwe ya, obere ndu eji nke ahụ enweghị asụsụ Spanish. Ma dị ka ọ dị nkịtị, a magnetized odori USB maka batrị elekere. Dị ka anyị na-ekwu, isi na opekempe anyị nwere ike ịtụ anya.
Ọdịdị nke anụ ahụ nke HAYLOU RS3
Anyị ekwuola na ọkwa mara mma ọ dịghị adọta uche. Ma nke a bụ n'ọtụtụ ọnọdụ ihe dị mma maka nnukwu akụkụ nke ndị na-azụ ahịa. The HAYLOU RS3 bịarutere na eriri roba ojii, kenha aru nke nche, ya na a Ogologo nke 22 mm n'obosaras Jiri otu gụọ mmetụ dị nro ma chee na-eguzogide ọgwụ. Anyị nwere ike ịgbanwe ya ngwa ngwa ekele maka mmechi taabụ, na anyị nwere ọtụtụ eriri na ngwa dị na weebụsaịtị HAYLOU.
Anyị na-ele ya anya ihuenyo, na nke a nke Gburugburu udi. Formatdị nke nwere ndị nkatọ na ndị hụrụ ya n'anya nha anya, mana nke ahụ na-enye onyonyo mara mma na nke emeziri. Anyị chọtara a 1.2-anụ ọhịa AMOLED panel diagonal nke anyị nwere ike ịhọrọ ike nke nchapụtama ọ bụ, ihe anyị agbagharala na ngwaọrụ ndị ọzọ anwale.
Nowtụ ugbu a gị Uzoigwe RS3 Na ego
Emecha gị na ihuenyo na 2.5 D curved n'ọnụ na-eme ka ọ gwakọta seamlessly na aluminum alloy etiti. Ha na-enye ihe magburu onwe ya ahụmịhe onye ọrụ ọ dịkwa ezigbo ụtọ imetụ aka. Na-elegharaghị nke ahụ anya mkpebi gịnị ka anyị na-ahụ 390 x 390 ppp dị mma karịa ihe ọtụtụ asọmpi na-enye.
Anyị hụrụ n'akụkụ aka nri bọtịnụ abụọ metu. Agbanyeghị na ihuenyo nwere njikwa teknụzụ dị mfe njikwa, enwere bọtịnụ anụ ahụ mgbe niile. Na elu bọtịnụ na-eme ihe dị ka bọtịnụ home. Anyị nwekwara ike pịa ya ka ịgbanwuo ma ọ bụ gbanyụọ ihuenyo ahụ. Ma ọ bụ iji ogologo pịa iji gbanye ma ọ bụ gbanye elekere n'onwe ya.
El bọtịnụ ala, na ihuenyo dị na ya na-emekwa ka ngosi ya rụọ ọrụ. Ma nke ya arụ ọrụ ozugbo enwere ike ịhazi. Anyị nwere ike ịhọrọ ọrụ ọ bụla ma ọ bụ ozi akọwapụtara iji rụọ ọrụ mgbe etinyere ya. Ihu igwe, rụọ ọrụ egwuregwu, ma ọ bụ lelee ozi ndị natara ...
Na azụ bụ ihe otiti obima ọ bụ. Anyị na-enweta ngwa ngwa ngwa ngwa nke dịkwa mma ma e jiri ya tụnyere mita ndị ọzọ a pụrụ ịtụkwasị obi. Mana anyị ga-ekwu na site n'ọgụgụ obi na-arụ ọrụ mgbe niile, a na-ahụta batrị dị elu karịa nke nkịtị. Ọzọkwa ihe magnetik mkpọ maka odori.
HAYLOU RS3 Atụmatụ
Dị ka smartwatch ọ bụla bara uru nnu ya, ekele maka njikọ nke ama anyị, ọ na-enye anyị Na nkwojiaka, n'oge ahụ, ozi nke ozi, oku na ọkwa nke Ngwa ndị ahọpụtara. Maka nke a Njikọ Bluetooth 5.0 na-enye a anụ ahụmahụ na-enweghị iru ala disconnections. Ọ bụrụ na ị kwenyelarị, zụta ebe a Uzoigwe RS3.
The HAYLOU RS3 atụmatụ a 6-axis accelerometer na a High nkenke GPS na-agbakọta iji nye ọgụgụ ziri ezi nke usoro ọ bụla. Anyị ga-enwe ndekọ ndekọ ọrụ ziri ezi gbasara ụzọ dị anya, ebe na mmegharị, yana calorie ndị anyị nwere ike isure na mgbatị ọ bụla. Anyị nwere ike ịhọrọ n'etiti Ihe omume 14 tinye ya.
Anyị na-achọpụtakwa, na mgbakwunye na ịgụ ọgụgụ ziri ezi nke obi anyị, ụma nke ọtụtụ na-enwebeghị. Ejiri HAYLOU RS3 nwere a ngwa anya ihe mmetụta nwere ike inye anyị agụ na ọbara oxygen saturation (). Dị mkpa data, nke ọnụ na a nyocha zuru oke nke nrọ anyị, nwere ike inyere anyị aka imeziwanye ọnọdụ anụ ahụ anyị ma mụta ilekọta onwe anyị.
Nkebi nke batrị ọ na-enye anyị ezigbo data. Anyị hụrụ batrị ya 230 mAh na-akwụ ụgwọ na a priori adịghị ka nnukwu ihe. Mana anyị kwesiri iburu n'uche na HAYLOU RS3 bụ ngwaọrụ "dị warara". Ke adianade do, ekele magburu onwe ike arụmọrụ, ya nnwere onwe na-agbatị elu ọ kachasị ụbọchị 15.
Anyị nwere ike ikwu maka HAYLOU RS3 na ọ bụ elekere mmiri. Enwere ọtụtụ ndị na-enye nguzogide mmiri ma ọ bụ ájá site na asambodo IP dị iche iche. N'okwu a, anyị ekwesịghị ịtụ ụjọ ịnweta smartwatch anyị ma ọ bụ mikpuo. Ọ bụghị n'efu iguzogide 5 ATM y anyị nwere ike mikpuo ya ruo mita 50. Igwe ya "unibody" dị dara na-eme ka ọ dị mma maka ịchịkwa egwuregwu ọ bụla ị na-eme, ọbụlagodi na ọ bụ n'ụsọ osimiri ma ọ bụ na ọdọ mmiri.
HAYLOU RS3 Njirimara Njirimara
Nhazi Gburugburu alkpọ oku
Size 1.2-anụ ọhịa AMOLED
Mkpebi 390 x 390 dpi
Mmiri mmiri 5 igwe ndọrọ ego
Mmetụta ụda obi Si
SpO2 saturation akara Si
Achịkwa 50 m
Nguzogide 5 igwe ndọrọ ego
Batrị Lithium 230 mAh
Onwe ya Ruo ụbọchị 15
Akụkụ X x 50.5 43.4 12.5 mm
Ahịa 59.50 €
Linkzụta njikọ Uzoigwe RS3
Uru na ọghọm nke HAYLOU RS3
Mmesho nke ọbara saturation.
Mkpebi nke ihuenyo.
Batrị dị mkpụmkpụ na GPS.
O yiri emebi emebi tupu adaa.
Batrị na GPS
Ọdịdị na-emebi emebi
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » HAYLOU RS3, nyocha, arụmọrụ na ọnụahịa
Uzo ndi ozo di nma nke Amazon
Otu esi eme ka igwe na-aga ngwa ngwa na usoro 9 a